सेयर बजारको कारोबार डेढ अर्ब नजिक » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सेयर बजारको कारोबार डेढ अर्ब नजिक
मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ११:२६ मा प्रकाशित !
८ चैत, काठमाडौँ। मंगलबार पनि सेयर बजार ठूलो अंकले बढेको छ। यस दिन बजारको परिसूचक नेप्से ३७ दशमलव ९२ अंकले बढेर १४ सय ६२ अंकमा कायम भएको छ। २ दशमलव ६६ प्रतिशतले नेप्से बढ्दा कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ।
१ सय ४७ कम्पनीको १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। यसअघि सोमबार १ अर्ब २६ करोडको कारोबार भएको थियो। नेप्से उकालो लागिरहँदा कारोबार समेत उल्लेख्य बढ्दै गएपछि बजारमा उत्साह थपिएको छ।
यस दिन उत्पादन समूह स्थिर रही बाँकी सबै समूह उक्लिएका छन्। बिमा १०९, बैंकिङ ३९, होटल ३७, विकास बैंक ७६, जलविद्युत २०, फाइनान्स १२ र अन्य समूह ४ अंकले उक्लिए।
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ११ करोड ८३ लाखको कारोबार हुँदा दोस्रोमा रहेको एनसीसी बैंकको ५ करोड ८० लाखको कारोबार भयो। त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ करोड ४० लाख, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ५ करोड १५ लाख तथा इन्भेष्टमेन्ट बैंक संस्थापकतर्फको ५ करोड १३ लाखको कारोबार भयो।
४ कम्पनीका लगानीकर्ताले पुरा १० प्रतिशतले मूल्य कमाउँदा ९। ९ प्रतिशत मूल्य बढ्ने कम्पनीको संख्या १० रह्यो। रिलायबल माइक्रोफाइनान्स, डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट, लक्ष्मी लघुवित्त र छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ।
PREVIOUS POST Previous post: इन्भेष्टमेन्ट बैंकले खरिद गर्ने भयो एस डेभलपमेन्ट बैंक​
NEXT POST Next post: राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा गौतमबुद्धका आदर्शलाई आत्मसात गर्न आग्रह
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ११:२६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ११:२६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ११:२६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ११:२६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ११:२६